December 2020 - Sainpwar
နှစ်သစ်ကူးညတွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ဖောက်ဖျက်သူများကို ထောင်ဒဏ် တလ ချမှတ်မည်
နှစ်သစ်ကူးညတွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ဖောက်ဖျက်သူများကို ထောင်ဒဏ် တလ ချမှတ်မည် နှစ်သစ်ကူးညတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်း၊ ရပ်ကင်းများ စံချိန်တင် တိုးမြှင့်ချထားမည် ဒီနေ့ နှစ်သစ်ကူးညမှာတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်း၊ ရပ်ကင်းတွေနဲ့ လုံခြုံရေးအင်အား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး နဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေက ဒေသန္တရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်တွေအတိုင်း တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်း၊ ရပ်ကင်းတွေနဲ့ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် […]
တေးသံရှင်စိုင်းဆိုင်မော့တစ်ယောက် ကျန်းမာရေးအခြေနေဆိုးရွာနေတဲ့အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကိုပြောပြလာတဲ့ ဂျွန်လွင်
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဆရာ ဂျွန်လွင်ကတော့ International Modeling Agency ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်တွေထွက်ပေါ်လာအောင်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ သူတစ်ဦးပါ။ အရေးကြီးတဲ့ထိပ်တန်းအနုပညာပွဲတွေမှာလည်း ဆရာဂျွန်လွင်ဟာမပါမဖြစ်ပါဝင်ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အကြင်နာထွန်းကားရေး နာမည်လေးနဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အစွမ်းကုန် လှူဒါန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ “ရှမ်းပဲပုတ်လေးကျွန်တော်အဆိုတော်စိုင်းစိုင်မော့ကျမ်းမာရေးအမြန်ကောင်းပါစေ အခက်ခဲများလဲပြေလည်ပါစေဆုတောင်းပေးကြပါ။အကြင်နာတရားထွန်းကားရေး”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အဆိုတော် ကြီး စိုင်းဆိုင်မော်အတွက် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာပါ။ တကယ့်ကို အဆိုမှာ အသံအေးအေးလေးနဲ့ရင်ထဲထိအောင် သီဆိုနိုင်တဲ့ တေးသံရှင်ကြီးစိုင်းဆိုင်မော်တစ်ယောက်အမြန်ဆုံးကျန်းမာရေးကောင်းပါစေလိူ့ မှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ […]
နှစ်ပတ်အတွင်း ငွေဝင်/အရောင်းအဝယ် ကောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်…..
နှစ်ပတ်အတွင်း ငွေဝင်/အရောင်းအဝယ် ကောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် မနက်ဖြန်ကနေ ၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေ ကံတက်ချင်တဲ့သူတွေ ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ ဒီယတြာကိုလုပ်ပါ မနက် ၆:၀၀ကနေ၉:၀၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန်ယတြာ ကော်ဖီ ၃ခွက်ကို ပူပူနွေးနွေးလေးဖျော်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကို ကပ်လှုပါ။ ဖယောင်းတိုင် ၃တိုင်ပါ မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပေးပါ ဆုတောင်းရမှာပါ ယနေ့မှစပြီး ငွေဝင်ရပါလိုပါတယ် ထီပေါက်စေလိုတယ်ဟု အရှင် ဘုရားဟု ဆုတောင်းပါ တစ်ရက်ပဲလုပ်ရမှာပါ။ နှစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် ကံတွေတက်ပြီး အောင်မြင်မှု တိုးတက်မှုတွေရလာပါလိမ့်မယ် […]
သူ့ရဲ့ သမီးလေးကို ရှိသမျှ စောင်အကုန်ခြုံပေးပြီး ကိုယ်တိုင်အေးခဲသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ် သူ
သမီးလေးကို ရှိသမျှစောင်အကုန်ခြုံပေးပြီး ကိုယ်တိုင်အေးခဲသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ ညအချိန်မှာ သမီးဖြစ်သူကို နွေးနွေးထွေးထွေးထားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်း ကိုယ်တိုင်ကတော့ အေးခဲပြီးသေသွားခဲ့ကြောင်း asiaone သတင်းအရ သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူ အမျိုးသားကတော့ အသက် (၃၈) နှစ်အရွယ် ပရာဆာဟွန်မ်ဆိုသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အေးစက်တောင့်တင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ၎င်းရဲ့(၈) နှစ်အရွယ် သမီးလေး ပန်ဝီရာနိုအီဖာဟာ ဒီဇင်ဘာ (၇) ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ […]
မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါ ကုသဆေး အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ (FDA က အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါပြီ)
မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါ ကုသဆေး အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ (FDA က အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါပြီ) ပြည်တွင်းတွင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကုသဆေး (သောက်ဆေး) ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး မြန်မာ FDA ၏ အတည်ပြုချက်ရပြီဟု Pacific Medical industries က ယနေ့ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် တောင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင် သုံးစွဲနေသော Favipiravir 200 mg ဆေးပြားများကို ပြည်တွင်းပြည်ပညာရှင်များဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းသောကုန်ကြမ်းများဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း […]
ကိိုဂျွန်လွင်က ဘဝတစ်လျှောက်လုံး တာဝန်ယူပြီးကျောင်းထားပေးမယ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ အမေနဲ့ညီမလေးကို မခွဲနိုင်လို့ လေ ဆိုင်လေးကိုဘဲ ဆက်ထောင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ညီလေး
လေဆိုင်ညီလေးရဲ့ မိဘနဲ့တွေ့ဆုံပြီးညီလေးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ သူ့မိဘရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအလျှူရှင်တွေသိရှိအောင်သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…. ကျောက်ဆည်မြို့ အင်တိုင်းကျေးရွာကဖြစ်ပါတယ် မနေ့ညက ဒိုက်ရိုက်လွှင့်ဖို့ကမီးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်Vdပဲရိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီညီလေးကို သူလုပ်တဲ့လေဆိုင်ကိုအလုပ်မဆင်းခိုင်းတော့ပဲအလျှူရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတာနဲ့ ဒီညီလေးအတွက် အကောင်ထည်ဖော်မှာဖြစ်သည့်အတွက်လက်ရှိ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ကြှနျတောျတို့ ဘဝတူညီကိုမြားစုပေါငျးအငျအားပရဟိတအဖှဲ့မှ အလြှူငှေ ၆၀၀၀၀ကပြျ လကျရှိအဆငျပွစေေရေးအတှကျ တကျနိုငျသလောကျလြှူခဲ့ပါတယျ.. ဒီညီလေးရဲ့အိမ်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာသွားရောက်နိုင်အောင် ကူညီပန့်ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ဘဝတူညီကိုများနှင့် ကျောက်ဆည်မြို့မှ ညီကိုများအားလုံးအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ🙏🙏🙏 ရုပ်သံကြည့်ရန် ဘဝတူညီကိုများဘေးရန်ကင်းကြပါစေ🙏🙏🙏 ေလဆိုင္ညီေလးရဲ့ မိဘနဲ႔ေတြ႕ဆုံၿပီးညီေလးရဲ့ဆႏၵနဲ႔ သူ႔မိဘရဲ့ဆႏၵေတြကိုအလၽွဴရွင္ေတြသိရွိေအာင္သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္…. ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ အင္တိုင္းေက်းရြာကျဖစ္ပါတယ္ မေန႔ညက […]
Pfizer-BioNTech ရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်။ (၁) အရေးကြီးတာကြောင့်အသေးစိတ်သေချာဖတ်စေလိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး mRNA ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းအသေးစိတ်သိသမျှ ပြန်လည်မျှဝေလိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး FDA အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလည်းဖြစ်တာကြောင့် အသေးစိတ်ရေးစရာတွေရှိပြီး (၁) ကနေစပြီး နံပါတ်စဉ်နဲ့ အပိုင်းလိုက်ခွဲရေးပါရစေ။ အခုကာကွယ်ဆေးထိုးချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထိုးနှံရမလဲဆိုတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းကို အရင်စပြောပါမယ်။ 🇲🇲 မြန်မာပြည်မှာ အောက်ခြေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနားမလည်ပဲအခက်အခဲတွေ့မယ့်အပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ သိမ်းဆည်းနိုင်သောအပူချိန်အဆင့်ဆင့်ကို သေချာဂရုပြုလိုက်နာပါ။ Pfizer-BioNTech ရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး BNT162b2 ဟာ 🇧🇪 ဘယ်ဂျီယံ စက်ရုံကထုတ်ထုတ်ခြင်းမှာ […]
နဝရတ္ ကိုးပါး၏ အစြမ္းသတၱိမ်ား ၁။ ပတၱျမား – ဘုန္းႀကီးျခင္း။ ၂။ ျမ – ေအးခ်မ္းမႈ ရွိျခင္း။ ၃။ စိန္ – ဂုဏ္ပညာ ျမင့္မားျခင္း။ ၄။ နီလာ – ေမတၱာစြမ္းအား စူးရွျခင္း။ ၅။ ေဂၚမုတ္ – ခြန္အား ႀကီးမားျခင္း။ ၆။ ဥႆဖယား – က်န္းမာျခင္း။ ၇။ သႏၲာ – အျမင့္သို႔ […]
အသုဘ႐ုပ္အေလာင္းကုိ ေဆး႐ုံႀကီးအေအးတိုက္မွထုတ္ယူလာၿပီး ေသဆံုးသူရဲ႕အိမ္သုိ႔ပို႔လိုက္ေသာအခါ.. အသုဘ ႐ုပ္အေလာင္းကို ေဆး႐ုံႀကီး အေအးတိုက္မွထုတ္ယူလာၿပီး နာေရးကားေပၚတင္၍ ေသဆုံးသူရဲ႕အိမ္သို႔ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ေမာင္းထြက္လာခဲ့တယ္။ အိမ္ေ့ရွကိုနာေရးကားေရာက္လာေတာ့….မိဘေက်းဇူးေတြနဲ႔ အယူသီးမႈေတြကို ခြဲျခားသိျမင္နိင္ၿပီး သိပ္ခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အမွန္တရား။ အသုဘ႐ုပ္အေလာင္းကို ေဆး႐ုံႀကီးအေအးတိုက္မွထုတ္ယူလာၿပီး နာေရးကားေပၚတင္၍ ေသဆုံးသူရဲ႕အိမ္သို႔ပို႔ေဆာင္ဖို႔ေမာင္းထြက္လာခဲ့တယ္… အိမ္ေ့ရွကိုနာေရးကားေရာက္လာေတာ့ အေလာင္းကိုအိမ္ထဲသြင္းမယ္ လုပ္စရာရွိတာလုပ္မယ္ေပါ့ ကားေပၚကေနအေလာင္းခ်မယ္လုပ္ေတာ့ အိမ္ရွင္ေတြကအေျပးေရာက္လာၿပီး မ်က္ရည္ေလးစမ္းတမ္းတမ္းနဲ႔ ဆရာတို႔ အိမ္ထဲအေလာင္းမျပင္ဘူးေနာ္ အိမ္ေ့ရွမွာပဲအေလာင္းျပင္ေပးပါေနာ္တဲ့ ” အမဘာျဖစ္လို႔လဲ ” လို႔ကြၽန္ေတာ္ကေမးလိုက္ေတာ့… ဟိုေလ ” ဆရာ […]
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ တေးသံရှင်အောင်ထက်ဟာဆိုရင် သီချင်းကောင်းလေးတွေကို အသံချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ သီဆိုတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို ခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက်ဆုံရာပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အောင်ထက်ကို စတင်သိရှိခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းခွေတွေပါ ထွက်ရှိလာကာ အခုဆိုရင် အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ နိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်တစ်ဦး အဖြစ် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နေနိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် တေးသံရှင်အောင်ထက်က သူ့အနေနဲ့ အဆိုတော်ဘဝကို မရောက်ရှိခင်က လှိုင်သာယာဘက်မှာ စက်ရုံလုပ်သားတစ်ဦးအဖြစ် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရကြောင်း […]